"Muudama Waraana Wayyaanee guyyaa dheengadda Wayyaanee
gabaasaqeerroo: “Muudama Waraana Wayyaanee guyyaa dheengadda President Wayyaanee Dr Mulaatuu Tashoomaa gaggeessa ture Waliin Walqabate Waldiddaafi Wal Gaarreeffannaan Mooraa Waraana Wayyaanee Xoolaayi-Jimma, Awaash Arbaafi Huursoo gidduutti dhalatee jiraachuu Odeessi keessa waraana wayyaaneetii bahe ifa godheera. Muudama waraana wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasas turaniifi waraana uummata biyyatti bakka hin buune kana ilaallchisuun haalotni qabatamaan mormii mooraa waraanaa keessatti uumaa jiran:
1ffaa. Loltootni kun Sadarkaan Muudamaa kun erga kennameefi baajatni guddaan ramadameefi Waggaa tokkoo oliif tajaajila kan turan yoo ta’uu , amma haala shakkii waraanaa keessatti uumama jiruufi isanumti muudamtootni muudama waraannifi uummatni hinbeekne irraa shakkiin guddaan waan dhalateef Uummataafi loltootatti beeksisuuf jechaa ifatti sadarkaa muudama loltoota gaggeessine jechuun wayyaaneen Karaa foddaa TV ishee lallaba jiraachuun saaxilamera.
2ffaa Loltootni amma Sadarkaan muudamaa kun President Mulaatuu Tashoomaan kennameef Kun sadarkaadhuma kanaan wayita tajaajilaa turanitti Saamicha Kontrobaandii Kellawwaan gurguddaa biyyatti irratti kanneen gaggeessa turanidha, (Kontrobaandistootadha),
3ffaa Loltootni Muudamaan kun yeroo mummichi ministeera duraani Mallas Zeenaawii jiruu kanneen ergamtoota isaa ta’anii dandeettiifi gahumsa kanneen hin qabne ta’uu odeessi keessa wayyaanee bahee saaxilera . loltootni muudaman kun sirna wayyaanee TPLF/EPRDF’f kanneen amanamoofi dhiiga namaa dhangalaasuun yakka uummata biyyattiirratti rawwacha turanidha.
4ffaa Muudama kana silaa yeroo Mallas Zeenaawwiin lubbuun jiru kennamaaf ture, jarrii sadarkaa barnootaa waan hin qabneefi dandeettiin isaanii sadarkaa kanaaf gahaa waan hin taaneef sadarkaa muudamaa kana kan dhorkatamanii ufii akka hin kaasneef saraanaakeessatti sadarkaa garaagaraa irratti baajatni horiin guddaan ramadameefi irraa caalaatti hojii basaasummaaf wayyaanee tajaajilaa kanneen turanidha. Hedduun isaanii yeroo dhiyoo waggoota lama dura barnoota sadarkaa 2ffaa Mana barumsaa Agaziyan jedhamu kan naannoo Embassy Sudaanitti argamutti kan barachaa turan ta’uun saaxilameera.
5ffaa Loltoota muudaman kana keessa kanneen itti gaafatamtoota Mana hidhaa bakkoota garaagaraa ta’uun hidhamtoota ilmaan Oromoofi saboota Cunqurfamoo hiraarsaa turan jiraachuu odeessii keessa waraana Wayyaanee bahee nu qaqqabee jiru ifa godhera.
“Ambo keessatti qeerransoon koo faaya aadaa sodaa tokko malee gurgurata.
Kanas diinatu harka keessaa qaba jedhaa Kalas
Hojiin isaa hara galfiif bu’aa qabaatee otuu hin taanee, humnaafii hanga danda’een qabsoo isa irraa eeggamtuu bahachuudhaan sabboonaa AMBO keeysatti socho’uudha.
Yaaddanoo qabsaahota, abjuu fii kaayyoo DAAWIITII BILISUMMAATI…